Global Voices teny Malagasy » Topimason’ny Fiainana Andavanandron’ny Ghaneana Asehony Amin’ny Alalan’ny Diezy Twitter · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Septambra 2015 9:38 GMT 1	 · Mpanoratra Kofi Yeboah Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Ghana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Maro ny olona nampiasa Twitter mba hilaza amin'izao tontolo izao ny zavatra tsy manam-paharoa momba ny firenen'izy ireo izay tsy vaovao mahazatra ara-toekarena na ara-politika. Ny kaonty Kenyana ao amin'ny Twitter (@KOT ), ohatra namorona tontolo iainana ho an'ny Keniana mba hizara vaovao momba ny tanindrazan'izy ireo.
Tsy misy hafa amin'izany i Ghana. Mampiasa ny diezy twitter #233moments , noforonin'ilay bilaogera Ato Ulzen Appiah  ny Ghaneana mba hisioka ny zavatra tena nataon'izy ireo tamin'ny 2:33 hariva (ora GMT)). Namelabelatra momba ity diezy ity tao anaty lahatsoratra  hoan'ny Daily Graphic ao Ghana ny mpiara-manorina ny Global Voices Ethan Zuckerman .
Nanisy teny sompirana momba ny Andro Iraisam-pirenena hoan'ny Mpilatsaka An-tsitrapo ankalazaina ao Ghana amin'ny 21 Septambra i Ato Ulzen Appiah :
2:33hariva ao #Accra , #Ghana . Miandry fatratra ny 19-21 Septambra. Inona no ataonao amin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Mpilatsaka an-tsitrapo
Nisioka ny fampahafantarana ny Impact Hub  ao Ghana i John Roberts.
Nandefa ny sarin'ny Elmina Castle  [Tranomimanda Elmina] ao Ghana, izay namboarin'ny Portiogey tamin'ny 1482 ny Ghana Life:
#233Moments  miaraka amin'i @EthanZ @amegaxi @MarComModel @blaqhaq @kofiemeritus  & 8 hafa
Nandefa sary misy fiteny mahatsikaiky hita amin'ny tro tros , mini-bus an'olo-tsotra i Efo Dela sy i Publicis West Africa :
“FANTA TOO CAN BOOZE” Deepness level: Mariana Trench #TrotroDiaries  #233moments  pic.twitter.com/HKT2v5NooX 
#233moments ! Tpt
2:33 maraina ao Madina, Accra. Mianatra sy mampihatra ny fahaizako hanampiana ny #opendata  ao Ghana miaraka amin'ny @Enock4seth .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/09/05/74019/
 Andro Iraisam-pirenena hoan'ny Mpilatsaka An-tsitrapo : https://en.wikipedia.org/wiki/National_Volunteer_Day
 Elmina Castle: https://en.wikipedia.org/wiki/Elmina_Castle
 tro tros: https://en.wikipedia.org/wiki/Tro_tro